SpaceX ayaa mar kumbuyuutar ah u bilaabi doonta 60, oo waxaad ku daawan kartaa halkan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA SpaceX ayaa mar kumbuyuutar ah u bilaabi doonta 60, oo waad ku daawan kartaa halkan - BGR
SpaceX ayaa mar kumbuyuutar ah u bilaabi doonta 60, oo waad ku daawan kartaa halkan - BGR
SpaceX ayaa sii waday sanadkeeda mashquulka ah iyada oo la soo saarey qoryo kale. Waqtigaan, waxay u dirtaa suugaan u gaar ah warbaahinnada isgaadhsiinta ee Dunida Dunida, iyagoo rajeynaya in ay fududeeyaan faafinta shabakadaha internetka ee shabakadaha internetka ee meelaha fog. Hawlgalka, oo la yiraahdo Starlink, waxay u baahan tahay soo dejinta rakaabyo badan, iyo SpaceX waxay 60 u soo diri doontaa caawa.
Sida ugu badan ee loo furo SpaceX, shirkaddu waxay soo bandhigi doontaa munaasabadda oo dhan. laga billaabo ilaa dhammaadka. Waxaad awoodi doontaa inaad daawato bilowga batroolka, isku dayga ah in lagu soo celiyo Falcon 9 oo ku yaala SpaceX drone iyo, suurtagal ahaan, in la soo diro satellite-ka.
Daaqada bilowga waa inay furan tahay 22h30. EDT. Si ka duwan noocyo kale oo dhowaan soo ifbaxday oo leh fursado degdeg ah, StarLink wuxuu bilaabi doonaa saacad iyo badh hal saac si loo bilaabo. Haddii shuruudaha aysan si fiican u dhicin ka dib marka la furo daaqada furitaanka, weli waa suurtagal in waxyaabo cadaan ah ka hor inta aan la xirin daaqada.
SpaceX waxay bixisaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxa laga filayo soo koobitaanka soo-saarka:
Kadib marxaladaha kala soocida, SpaceX waxay isku dayi doontaa in ay dabaqa koowaad ee Falcon 9 ku qaadato dariiqa "Dabcan, weli waan ku jeclahay", kaas oo la dhigan doono barta Atlantic Ocean. Qiyaastii saacad iyo laba daqiiqo kaddib marka la gooyo, satalaytada Starlink waxay bilaabi doonaan inay galaan meel sare oo ah 440 km. Waxay markaa isticmaali doonaan qalabka dul saaran si ay u gaaraan meel sare oo xawaaladeed oo 550 km ah.
Waxyaabaha u muuqda inay si fiican u socdaan SpaceX si ay u bilaabaan howlgalkooda Starlink maanta, laakiin haddii ay u baahan yihiin in dib loo dhigo, daaqad nadiif ah ayaa horey loo qorsheeyay. Khamiis isku mar.
Source Source: Terry Renna / AP / REX / Shutterstock
Culumadu waxay gacmahooda ku qaataan geed ka weyn kan 2.600
Ka soo wac Christchurch: Facebook ayaa xaddidaya isticmaalka video live